Madaxweyne Xaaf oo ka hadlay dhismaha dekadda Hobyo – Radio Daljir
Madaxweyne Xaaf oo ka hadlay dhismaha dekadda Hobyo
Abriil 10, 2018 11:34 b 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf,ayaa waxaa uu ka hadlay dhismaha la qorsheynayo in lagu smaeeyo Dekadda Magaalada Hobyo ee Gobolka Mudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in afartan Sano wax ka badan uu maqlayay in la dhisayo dekadda Hobyo hayeeshee uusan marna arag dekaddaas oo la dhisayo.
Ganacsatada iyo dadka wax heysta in ay ka qeybqaataan dib u dhiska dekadda Magaalada Hobyo ee Gobolka,mudug,waxaana uu Ganacsatada iyo maalqabeennada ku dhiirra geliyay in maamulkiisa uu bixinayo dhul laga dhisto Hoteello oo Hobyo ku yaalla.
Waxaa uu sheegay in uu dadaak badan ku bixiyay sidii loo heli lahaa dib u dhiska Dekadda Magaalada Hobyo,waxaana uu ballan qaaday in marka uu dhamaado Ramadaanka soo socda ay billaabaneyso dhismaha Dekadda Magaalada Hobyo.
Farmaajo iyo Jawaari oo maanta si wadajir ah Saxaafadda ula hadlay
Dowladda Federaalka oo Guddi u saartay Wadashaqaynta Hay’addaha UNka